Xiaomi Return Mi chat ကို အသံဖိုင် chat Application အဖြစ် အသုံးပြု၍ တရုတ်ထုတ်ကုန်များ မွေးထုတ်သွားမည်ကို စိုးရိမ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေ - Pandaily
Xiaomi announced on Saturday that its IM app MiTalk will be revamped asavoice chat app. (Source: MiTalk)
Mar 02, 2021, 15:10ညနေ 2021/03/03 23:57:52 Kelsey Cheng
ပြီးခဲ့တဲ့ စနေနေ့က တရုတ်စမတ်ဖုန်း ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ ပြောကြားချက်အရ ဒီအက်ပ်ဟာ ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုသာ ဖြစ်လာပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး အသံဖိုင် chat platform-တရုတ်မှာ အလားတူ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းတစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Clubhouse ကို ပိတ်ထားပါတယ်။
“Mi Chat ကို ျပန္လည္စတင္ေနပါၿပီ” ဟု ယင္းကုမၸဏီက Weibo တြင္ အသိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း သိရသည္။
“The Mi Chat က Professional Professional Special chat app ကိုရည်ရွယ်ပြီးလုပ်တာပါ၊ ဒီမှာက ကဏ္ဍအသီးသီးကပညာရှင်တွေရဲ့ share ကိုနားထောင်နိုင်တယ်၊ ပြီးတော့ international scho ကိုကြည့်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်”Hand to hand sching ကိုလုပ်လို့ရတယ်. singing in you singing in you singing theme ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်” လို့ထည့်သွင်းရေးသားခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူတစ်နည်းနည်းပါးပါး beta ကိုဖိတ်ကြားမှုရရှိခဲ့ပါတယ်လို့လည်းဖြေဆိုခဲ့ပါတယ် ။
Mi Chat ကတော့ လုံးဝအသစ်စက်စက်ပစ္စည်းဖြစ်မယ့် အကောင့်နဲ့ ဒေတာတွေကို အရင်လွှဲဖို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။
၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက် အော်တိုဆန်အော့ဖ်က ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်မှာ စကားစမြည် ပြောလာပါတယ်။ IM Applicationဆွဲငင်အားရရှိဖို့ ပျက်ကွက်ခြင်းWeChat နဲ့ Tencent တို့ဟာ ပျောက်ဆုံးသွားပြီး နာက်မှာ တစ်နေ့ကို သုံးစွဲသူ ၁၀.၉ သန်းအထိ အသက်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။
The Mi Chat Application က Professional ပီသတဲ့ Audio chat Application ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ (Source: IT House)
ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း တ႐ုတ္နည္းပညာကုမၸဏီ အမ်ားအျပားက အလားတူ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ေၾကညာခဲ့ၿပီးေနာက္ Mi Chat ၏ ေခါင္းေဆာင္အေျပာင္းအလဲကို ေအာင္ျမင္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ၌ ပါ၀င္ခဲ့သူျဖစ္သည့္ Clubhouse က ေဖေဖာ္၀ါရီ ၈ ရက္တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ တားျမစ္ခဲ့သည္။
Topics: မြင်ကွင်းတရုတ်စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သူ Xiaomi က ကိုယ်ပိုင်ကားထုတ်လုပ်ရန် စီစဉ်နေ
ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ အွန်လိုင်းကနေ Yok-Yok-top music လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ အပလီကေးရှင်းကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး “Aymuk” (ခေါ်) Interactions feature ကို အသုံးပြုသူတွေအတွက် Chat room အဖြစ် ဖန်တီးပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတွေကိုလည်း ဖိတ်စရာမလိုဘူး။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ အလားတူအပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Capital Coffee ” ကို တရုတ်နည်းပညာသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက် 36kr က တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဘောင်ထဲကပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးပြီး friends platform ထဲဝင်ပါ။
တခြားအက်ပ်တွေထဲမှာတော့ Encryption Money Entrepreneurs & Dizhua (ဘ) Justinက တီထွင်ထားတဲ့ အက်ပ်နှစ်ခုကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ Dizhua (ေခၚ) Zaih (ေခၚ) Knowledge Sharing Platform ကို စတင္ျဖန္႔ခ်ိၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ သီးျခားေလွ်ာက္လႊာအျဖစ္ ျဖန္႔ခ်ိမည္ ျဖစ္သည္။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေက အော်ဒီယိုပုံစံအပေါ် အခြေခံပြီး လူကြိုက်များအောင် လုပ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ သုံးစွဲသူတွေကြားမှာ ရေပန်းစားနေသလို လုံခြုံရေးနဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေကိုလည်း စိုးရိမ်နေကြဆဲပါ။
Beijing Con Technologies ဥကၠ႒ Zhou Yuhui သည္ ေဟာင္ေကာင္တြင္ Living Streaming Company Inke Development ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ေနာက္ထပ္ Clubhouse Clubhouse Software (Clubba) ကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ရန္ ေထာက္ျပခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ေသာ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကို တီထြင္ရန္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာင္ေကာင္ရွိ Livehouse Living Inke Inke Inke က ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ေနာက္ထပ္ Clubsoftsoftsoftsoftware တစ္ခုကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။
‘ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းကို အကြံပြု တာတွေကိုမလုပ်ဘဲ ဒီပစ္စည်းတွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်အောင် လုပ်လိုက်တော့မယ်၊ သုံးစွဲသူတွေကို ချန်ထားလိုက်တော့မယ်၊ အသင်းကိုရှုံးသွားလိမ့်မယ်”လို့ ပတ်ကပြောခဲ့ပါတယ်။
‘warba’ ဆိုတဲ့ အပလီကေးရှင်း ကို စတင်မိတ်ဆက်ပြီး နှစ်ပတ်အကြာမှာ အက်ပဲလ်စတိုးနဲ့ အန်းဒရွိုက်စတိုးတွေမှာ ဖြုတ်ချခဲ့ပြီး သည်အပလီကေးရှင်းကို ကိုးကားပြီး နည်းပညာနဲ့ ပုံစံမြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ နည်းပညာမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ “36kr of Research Team of Research မှ ၄ ရက်သာ အချိန်ယူ တီထွင်ထားသည့် ယင်းအပလီကေးရှင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက် အထိ အသုံးပြုသူ ၄၀၀၀ ကျော် မှတ်ပုံတင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား” ဟာ လူခ်စ္လူခင္ေပါတဲ့ “မီဒီယာ” ဆိုၿပီး လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ေရးရာ သံုးသပ္ခ်က္ေတြ၊ WeChat မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္မွာ အခုလို အလားတူ ေဖာ္ျပထားတဲ့ စင္ျမင့္ေပၚမွာ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ ႀကီးၾကပ္ေရး ကိစၥေတြကို တင္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
သူက “ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သုံးစွဲသူတွေကို အကြီးစားတစ်ဝက်လောက် ဒါမှမဟုတ် အများပြည်သူသိအောင် နေရာလွတ်မှာ စကားပြောဖို့၊ ပလက်ဖောင်းပေါ်တက်ဖို့နဲ့ သုံးစွဲသူတွေအတွက်လည်း အန္တရာယ်ရှိတယ်” လို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ developer တွေရဲ့ သဘောထားမှတ်ချက်တွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ခက်ခဲသလို Chat Room တွေမှာလည်း ဆာဗာစရိတ်တွေ တိုးမြှင့်ပံ့ပိုးပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အသံဖိုင်ကို အခြေခံထားတဲ့ platform ဖြစ်တာကြောင့် အပြင်က အင်တာနက် စည်းမျဉ်းတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ခက်ခဲပြီး စီစစ်ဖို့ မသင့်တော်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အန္တရာယ်ရှိတဲ့ သုံးစွဲသူတွေကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်တွေကို ယူဆောင်ပေးနေပါတယ်။
ေဆာင္းပါးမ်ားကလည္း အသံခ်တ္ထုတ္ကုန္ မ်ားကို အေလးထား၊ မဆန္းေတာ့ပါ။ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တရုတ္ႏိုင္ငံက Dating Application မွာ အႀကီးအက်ယ္ အသံုးျပဳေနၿပီဆိုရင္ အဲဒီကလပ္ေတြကို ေမြးထုတ္ရာမွာ ပင္လယ္နီေစ်းကြက္ထဲမွာ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီဆိုရင္ အခြင့္အေရးတခုမွ မရႏိုင္ပါဘူး။
ယင္းအက္ပလီေကးရွင္းသည္ အစပိုင္းတြင္ သံုးစြဲသူ မ်ားျပားေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္ ‘ေစးကပ္’ ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းရန္ ခက္ခဲႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သံုးစြဲသူမ်ားအၾကား WeChat ေပၚတြင္ အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုရဖြယ္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ျပဳလုပ္ေနသည့္ သတင္းမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္သာ ရယူ၍ မိမိတို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ဖြင့္ဟခဲ့သည္။
Mi Chat ကို ေျပာင္းမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္နဲ႔ ေငြလံုးေငြရင္းနဲ႔ ေကာ္ဖီထုတ္မလား၊ အဲဒီလို ကုမၸဏီအသစ္ေတြ၊ ကုမၸဏီႀကီးေတြနဲ႔ အင္တာနက္သံုးစြဲသူ သန္း ၉၄၀ ေက်ာ္ ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ဘယ္လိုဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ ၾကည့္ရမွာပါ။
Tags ∗xiaomi | audio chatroom app | clubhouse | smartphone maker